ndeapi marudzi akasiyana evabiridzi?
Kuru Chengetedzo Ndeapi marudzi Akasiyana eHackers?
Ndeapi marudzi Akasiyana eHackers?
Ndeapi marudzi akasiyana evabiridzi? Zvisinei nekutenda kwakakurumbira, havasi vese vanoba zvakaipa. Kune akatiwandei emhando dzevabati, uye mune ino posvo tichaenda kuburikidza navo.
Ndivanaani vari hackers zvakadaro uye ndezvipi zvinangwa zvavo? Zvakanaka, mubiridzi munhu anoshandisa hunyanzvi hwemakomputa uye ruzivo kuwana mukana kune masisitimu uye network.
Hackers vanhu vakangwara uye vane hunyanzvi vanopinda mumasystem uye network nechinangwa chekuba ruzivo kana kuita zvakaipa. Zvinangwa zvavo zvakasiyana: vamwe vanozviitira kunakidzwa, vamwe kupara mhosva.
Hackers inogona kuiswa muboka se:
Nyika yakatsigira hackers
Ngowani nhema vateki vanoshandisa ruzivo rwavo uye hunyanzvi kuti vawane nekushandisa kusagadzikana kwekuchengetedza kwekuwana mari kana zvikonzero zvakaipa. Mabasa avo anogona kukonzera kukuvara kukuru kune zvavanovavarira uye nehurongwa hwavo. Ngowani nhema nhema dzinowanzo kuve nechekuita nezviitiko zvematsotsi sekuba ruzivo rwemunhu neremari kana kuvhara mawebhusaiti nema network.
Ngowani chena vateki vane hunhu vanoshandisa ruzivo rwavo uye hunyanzvi kusimudzira kuchengetedzeka kwehurongwa nekuona kusagadzikana zvisati zvaitika ngowani nhema. Ivo vanonyanya kushandisa nzira imwechete uye zvishandiso ngowani nhema dzinoita, asi kusiyana neheti nhema, ngowani chena dzine mvumo yemuridzi wehurongwa kushandisa nzira idzodzo.
Nguruve dzakachena ndeevabheki vasina kushata seheti nhema, asi zvakare kwete sehunhu kunge ngowani chena. Vanogona kubatsira ngowani nhema muzvinhu zvavo, asi zvakare vanogona kubatsira mukutsvaga kushomeka kana kutarisa kusakwana kwesystem.
Kuzviuraya vabeki vakagadzirira uye vanoda kuita kurwisa kwe 'chikonzero', kunyangwe kana vakabatwa uye kutongwa.
Vanyori veScript ndeyevabiridzi avo vatsva mukubira uye vasina ruzivo rwakawanda kana hunyanzvi hwekuita hacks. Panzvimbo iyoyo, ivo vanoshandisa maturusi uye zvinyorwa zvakagadzirwa nevane ruzivo ruzivo.
Magandanga eCyber ​​vabiridzi vanofurirwa nedzimwe dzidziso dzezvitendero kana zvematongerwo enyika. Ivo vanoshanda kukonzera kutya uye kukanganisa kwehurongwa nemambure.
Hurumende inotsigirwa nevanobira mari vanotorwa nehurumende kuti vawane ruzivo rwechivande rweimwe hurumende.
Hacktivists vanopinda muhurumende kana masisitimu emakambani kunze kwekuratidzira. Ivo vanoshandisa hunyanzvi hwavo kusimudzira ezvematongerwo enyika kana zvemagariro ajenda. Zvinangwa zvinowanzove masangano ehurumende kana makambani makuru.
pamusoro pro 6 mutengo wemutengo
lg g6 isu zuva rekuburitsa
pixel 4a t nhare yekuburitsa zuva
Sprint & apos; s 4G LTE haina kunonoka kupfuura T-Mobile & apos; s 5G network, zvirinani izvozvi
Blast muNashville inotungamira mukuvharwa kweAT & T & apos; s isina waya sevhisi mumaguta akati wandei nematunhu
iOS 14.5 beta inokutendera kuti umise Spotify seyakagadzika mimhanzi inoridza
Yakanakisa AT & T yakabhadharwa uye prepaid zvirongwa zvekuenzanisa
Maitiro ekumisikidza proxy server kubatanidza mu Android